Kubata zvinhu, kuwedzera kwemutengo, uye maodha akarongerwa hafu yekutanga yegore rinouya! 8-inch wafer foundry chinzvimbo chizere
Nekuda kwekukurumidza kukura kwechikumbiro kudiwa kwemufananidzo sensor CIS, simba manejimendi chip PMIC, chigunwe cheminwe chiziviso chip, Bluetooth chip, yakakosha memory chip, nezvimwewo, odha dze 8-inch wafers inopisa. Sekureva kweSecurities Times, nekuvhurwa zvishoma nezvishoma kwe5G nharembozha, kudiwa ...
Musi waGumiguru 28th, Chengdu akabudirira kubata iyo China-Central neEastern Europe Ehupfumi neZvekutengeserana Cloud Fair uye Chengdu Special Cloud Fair. Ichi chiitiko chakakosha chikamu che 2020 China-Europe International Trade Dhijitari Exhibiti ...
Mushure mekubatanidza komputa kana TV netambo yeHDMI, iyo TV haina kupindura
1. Ndokumbira utarise kana chiteshi chekuisa chiratidzo cheTV chakashandurwa kuita "HDMI yekuisa", tanga wachinja iyo yekuisa yeTV yekuisa. Nzira: Menyu-yekuisa-chiratidzo sosi-interface, sarudza zvinoenderana neHDMI tambo uye TV socket (panogona kunge paine 1-5 yemhando dzakasiyana). 2. Kazhinji, komputa inokanganisa kuita separ ...